Itoobiya oo xirtay 103-Qof oo la xiriirinayo iska hor imaadka gobolka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Itoobiya oo xirtay 103-Qof oo la xiriirinayo iska hor imaadka gobolka
Itoobiya oo xirtay 103-Qof oo la xiriirinayo iska hor imaadka gobolka
Muqdisho(SONNA) Dowladda Itoobiya ayaa xirtay 103-Qof oo lala xiriirinayo dagaalo dhawaan ka dhacay Xuduudaha Labada Gobolka ee Qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada,sida uu Sarkaal ka tirsan Xukuumadda u sheegay Wakaalada Wararka ee Xinhua.
Isagoo la hadlaayay Wariyaasha, Negeri Lencho, oo ah Wasiirka Warfaafinta ee Itoobiya (GCAO), ayaa sheegay in la xiray 98-tuhmane oo ka soo jeeda gobolka Oromia iyo shan tuhmane oo ka soo jeeda Dowladda Deegaanka Soomaalida ee Itoobiya.
Wuxuu intaas sii raaciyay in xaaladda xudduudaha ee labada dawlad goboleed ay si aad ah u xasiliyeen inkastoo wali ay jiraan xaalado adag.
Dagaal culus oo ka dhacay xuduudda Dowladda Goboleedyada Oromida iyo Soomaalida bishii Sebtembar ee ku saleysnaa Qowmiaydda Labada shacab ayaa galaaftay geerida dad badan halka kumanaan kale ay ku barakaceen.
Xukuumadda Adis-ababa ayaa sidoo kale shaacisay iney qaadeyso talaabo kale oo lagu xakameynayo ganacsiga sharci darrada ah ee qaadka sababo kale oo khilaafka la xiriira.
Dowladda Itoobiya ayaa ciidamo badan oo adkeeya amaanka geysay deegaanadii dhawaan ay ku dagaalameen Qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromida ee dega dalka Itoobiya.
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland oo shir guddoomiyay kulan amniga ku saabsanaa
Next articleSidee ayey Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidamada Q.S.S u qaadaa kiisaska soo gaara?